Maxay yihiin dib u eegista wanaagsan ee SEO?
Ganacsiga hantida maguurtada ah waa goob aad u sarreeysa oo internetka ah halkaasoo kaliya oo ah hay'adaha ugu weyn ee leh sumcad heer sare ah oo fursad u leh inay ku sarreeyaan SERP. Hase yeeshee, shakhsiyaadka gaarka ah ayaa sidoo kale u dagaalami kara hogaanka. Si aad uga faa'iidaysato tartanka aadka ugu weyn suuqa, waxaad u baahan tahay inaad abuurto boggaaga oo la adeegsado user oo maskaxda ku haya iyada oo loo eego sida waafaqsan shuruucda search engine. Qaybta ugu muhiimsan ee ololeynta soo-saarka natiijadu waa dhisme isku xiran. Dhisidda Xiriirintu waa hab lagu abuurayo xiriirada soo socda ee laga helo ilaha webka ee la xidhiidha sawirada. Waa qayb ka mid ah habka ugu habboon ee goobta dib u habeyntu u baahan tahay in la qabto ka dib markaad hagaajisid waxyaabihii aad ka shaqayn jirtay. Backlinks waxay kaa caawineysaa kor u qaadista taraafikada iyo kor u qaadida awooda astaanta. Si kastaba ha noqotee, sida aan horay u soo sheegnay, in ay noqoto hogaamiye ku yaal suuqa guryaha ee hantida maguurtada ah waxay u baahan tahay waqti badan iyo maalgashi. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad u diyaargarowdo in geeddi-socodka helitaanka isku-xirnaanta tayada soo socda ay noqon doonto mid adag iyo waqti-qaadasho. Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid ilaha aad ka heli karto dib-u-eegid wanaagsan ee SEO. Qodobkani, waxaan ka wada hadli doonaa ilaha ilaha dhabta ah ee SEO-yada ah ee fududayn kara ololaha dhismahaaga xiriiriyaha ah iyo inaad ku darsato dadaalkaaga SEO. Ilaha dib u eegista wanaagsan ee hantida maguurtada ah ee SEO
Real SEO backlinks soo saaraha waa geedi socod lagu helo xiriirka boggaaga internetka ee meelaha kale ee khuseeya. Suuqyada dhijitaalka ah waxay u adeegaan sidii tartan weyn oo hore loo yaqaan 'old' oo ah halkaasoo kaqeybgalayaasha leh tirada ugu badan ee codadka (backlinks) inay helaan boosaska ugu sareeya. Qaabka ganacsiga oo dhan ee Google waxay ku saleysan tahay bixinta macluumaadka tayada iyo macluumaadka muhiimka ah. Habka kaliya ee lagu qaadan karo caannimada waxtarka waa in lagu xisaabiyo dhammaan gaadiidka soo socda ee mawduucani soo saaro iyo tirada saamiyada iyo isku xirnaanta u qalantaa. Tusaale ahaan, shabakadda bulshada ee caanka ah ee Facebook waxay leedahay in ka badan 32,348,008,110 backlinks. Waa hogaamiye buuxa oo ku saabsan SERP iyadoo la eegayo tirada codsiyada iyada oo dad badan oo isticmaalaya ay u codeeyaan sida ilaha tooska ah ee webka.
Si kastaba ha noqotee, dhab ahaantii, marka ay timaado ilaha internetka ee caanka ah oo caan ah oo cidhiidhi gala, helitaanka backlinks waxay noqon kartaa dhibaato. Intaa waxaa dheer, ma aha in dhamaanba dib udhiska la abuuro siman, qaar ka mid ahna waxay keeni karaan website-kaaga gayiga ah oo aad uga xun calaamadaha wanaagsan. Google waa mid caqli badan, wuxuuna si sahlan u kala saari karaa spamka iyo xiriirinta soo socota. Goobaha Google waxay falanqaynayaan kaliya maaha mid ka mid ah waxyaabaha ku xiran meelaha la isku xiro laakiin sidoo kale sumcad website ah oo ay yimaadaan. Taasina waa sababta qodobkan aan uga hadli doono oo keliya kaliya ku saabsan ilaha websaydhka leh ee aad ka heli kartid dib-u-qabasho tayada degaankaaga guryaha.
Qaybta muhiimka ah ee istaraatiijiyadani waxay ku saleysan tahay bixinta qadar qiimo leh oo hor leh milkiilayaasha kale ee ganacsiga. Tusaale ahaan, waxaad ku siin kartaa qiimaha dadka ku jira liiska emailkaaga adiga oo siinaya tigidhada xarumaha maxalliga ah ee aad la wadaagtay. Qeyb ka mid ah isweydaarsiga ganacsigaaga waa inuu ku jiraa gadaal dib u degsan guryahaaga. Markaad sidaa sameysid, waxaad dhistaa xiriiro is-kaashi leh oo aad la wadaagto lamaanayaashaada isla markaana waxaad ka helaysaa casiirka tayada leh ee boggaaga. Wada-hawlgalayaasha ganacsiga ayaa laga yaabaa inay xitaa ku daraan ereyo muhiim ah oo isku xiran oo ka yimaada goobta ku saleysan bulshadaada. Waxay si weyn uga qayb qaadan doontaa goobtaada SEO.
Sii markhaatiyaal ku saabsan guryaha hantida maguuraanka ah ee SEO
Daraasad mashiinka raadinta sahlan ayaa ku siin doona liiska bogagga internetka ee markhaati ka haysta iyaga warshadahaaga. Inta badan ilaha webkani waxay ku xiran yihiin qofka ka tagay dib u eegista. Haddii aadan weli haysan bog sidan oo kale ah, soo jeedi inaad abuurto mid ka mid ah oo weydii dadka inay ka tagaan dib u eegista halkaa. Waxay kaa caawin doontaa inaad hesho taageero dheeraad ah oo ku haboon iyo kor u qaadida awooddaada indhaha Google Source .